Maqaallada by Sumiya Sha
Sumiya waa qoraaga bogga Warbaahinta Xploited. Qoraa ahaan, Sumiya waxay isku dayday naqshado badan oo degel ah waxayna rajeyneysaa inay la wadaagto akhristayaasheeda.
10 Tilmaamood oo Loogu talagalay Naqshadeynta Websaydh Guri Guri ah oo Wada Wadayaasha Iibsadayaasha iyo Iibiyeyaasha Iney Hawl Galiyaan
Axad, Disembar 13, 2020 Axad, Disembar 13, 2020 Sumiya Sha
Iibsashada dhisme, guri, ama kondho waa maalgashi muhiim ah… badanaa waxay dhacdaa kaliya hal mar noloshaada. Go'aamada iibsiga guryaha waxaa dhiirrigeliya dad badan oo shucuur mararka qaarkood iska hor imanaya - marka waxaa jira waxyaabo badan oo u baahan in laga fiirsado marka la sameynayo degel degsi dhisme ka caawiya iyaga safarka iibsiga. Doorkaaga, wakiil ama dillaal guryaha, waa inaad fahamto shucuurta adoo ku hagaya xagga caqliga iyo